War-murtiyeed laga soo saaray kulankii Ra’iisul wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta. | Warbaahinta Ayaamaha
War-murtiyeed laga soo saaray kulankii Ra’iisul wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Kulan ay maanta isugu yimaadeen Ra’iisul Wasaaraha XFS iyo Xubnaha Midowga Musharaxiinta ayaa wax ay uga wada hadleen arimaha doorashooyinka dalka .
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Madaxda Musharaxiinta uga warbixiyay dadaalkiisa joogtada ah ee la xariira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray Guddiyada doorashada in ay waajiboodkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu hishiiyay ee doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha isaga oo tixgalinaya tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen Midowga Musharaxiinta ,dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo Bulshada Caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in Gollaha Wadatashiga Qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii si wadajir ah looga shaqeyn lahaa in doorashooyinka dalku ay u dhacaan si hufan loona saxi lahaa qaladaadka jira.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Guddiyada Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed iyo heer Federaal uu u qabanayo sidoo kale shir foogaan arag ah kaas oo lagaga hadlaayo daahfurnaata doorashada isaga oo caddeeyay in lala xisabtamaayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada.